Search opinion/blog by date range:
नवीन दित्य कोइराला -
अर्जुनकुमार श्रेष्ठ -
देशले निर्वाचनको एउटा ‘कोर्श’ पुरागरिसकेको यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीयतहको विकास निर्माण कार्यमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पनि छुट्टै उत्साह थपेको छ । देशको संविधान र कानुनद्वारा स्थापना भएको यस संस्था आफैंमा भैपरी आउँदा देश र नागरिकका लागि ‘पिलर’ का रुपमा खडा हुन्छ भन्नेकुरा हाम्रा विगतका अग्रजहरुका काम गराई र वर्तमान हाम्रा समकालिन साथीहरुको सक्रियताबाट पुष्टि हुन्छ । साथै अबका दिनमा हामीहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग मिलेर कार्य गर्न सहज हुनेछ भन्नेकुरामा हामी आशावादी हुनेछौं ।
प्रमोद अमात्य -
विश्वका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइनले जर्मन पेलीकन १०० एन कलम चलाउँथे रे। उनले आफ्नो संसार प्रसिद्ध सापेक्षवादको सिद्धान्त पनि यही कलमले लेखेका त हैनन्, जान्न मन छ। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेन भने कन्कलिन क्रेसेन्ट फिलर कलमले लेख्थे। अझ उनी कन्कलिन पेन कम्पनीका आधिकारिक प्रवक्ता समेत थिए। उनले भन्ने गर्दथे कि उनलाई यो कलम टेबलमा गुड्केर नजाने भएर मन पर्छ। हाम्रा साहित्यकारको कुरा गर्ने हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कान्छी औला जत्रो शिसाकलम भएपनि लेख्न पुग्थ्यो रे। प्रसिद्ध निबन्धकार शंकर लामिछानेले आफ्नो निबन्धमा यसबारे जिकिर गरेका छन्। उनलाई मुना मदन, लक्ष्मी निबन्ध सँग्रह र अन्य कालजयी महान कृति सिर्जना गर्न न मोब्लाँ, न वाटरम्यान न त कुनै अन्य विलासी कलम चाहियो। न उनले ठीक्कैको पार्कर वा शेफर पेन नै चलाए होलान।
एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष पदका प्रत्याशीहरूको सार्वजनिक बहस कतिको सान्दर्भिक?
अमेरिकामा सन १९६० सेप्टेम्बर २६ मा पहिलो पटक डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदार जोन एफ. केनेडी र रिपब्लिक पार्टीका रिचर्ड निक्सन बिच शिकागो शहरमा सार्वजनिक बहसको कार्यक्रम भएको थियो। जुन डिवेट चार राउण्डसम्म चलेको थियो। संसारको सबै भन्दा ठुलो प्रजातांत्रिक मुलुकमा यसरी राष्ट्रपतिय चुनावमा चल्दै आएको बहस सन २०१६ को राष्ट्रपतिय चुनावसम्ममा आईपुग्दा तिन राउण्डसम्म पुगेको देखिन्छ। सायद यसैको सिको गर्दै एनआरएनए एनसीसी अध्यक्ष पदका प्रत्यासीहरुको बहस कार्यक्रम चलिरहेको छ। वास्तवमा अति नै सह्रानिय कदम हो। तर यसरी सिको गरिरहदा यो समय सान्दर्भिक छ कि छैन? बास्तवमा यसको विश्लेषण गर्न जरूरी हुन्छ। विभिन्न पत्रकारहरूको संघ संस्थाहरू एवम गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरुको आयोजनमा गत अप्रिल देखि शुरू भएको डिबेट कति श्रृंखलासम्म पुग्ने हो कसैलाई थाहा छैन। विभिन्न अनलाईन मिडिया एवम सामाजिक संजालहरू नियाल्दा आगामी दिन डिबेट हुदैछ भनेर खबरहरू पढन पाईन्छ। वास्तवमा चुनाव हुने कहिले थाहा नै छैन तर डिबेट गरिहाल्नु पर्ने हतारो। वास्तवमा यो लाजलाग्दो दृश्य हो।
कुलमान किन बिबादमा?
रूद्र पाण्डे -
कुलमानले भ्रष्टाचार गरेका छैनन भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। उनि नेपाल सरकारका स्वच्छ छवीका कर्मचारी हुन। यो सर्वसाधारणले अनुभव गरेको कुरा हो। कुलमान भन्दा अगाडी उनि वसेको ठाउँमा दर्जनौ अनुभवीहरु आए। उनिहरुले निभाएको भूमिकामात्र सम्झने हो भने कुलमान कुन दर्जाका नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन भन्ने कुरा बुझ्न असहज छैन।
विदेश भूमिबाट नेपालीले देखाउने माया जायज हो कि ढोंग?
सन्तोष निरौला -
देशका युवा बिदेशमा पलायन हुनु आफैमा जटिल समस्या हो, आर्थिकरुप जति सुकै योगदान गरेपनि सामाजिक, सास्कृतिक, र राजनैतिक क्षेत्रमा नराम्रो असर गरेको छ। धेरै खरका पानीचुहिने छानाहरु आज जस्ता पातले ढाकिए पानी मन ढाक्ने ब्यक्तिको अभाब झन् बढ्न थालेको छ। सामाजिक ब्रिकृति र राजनैतिक कुसंस्कारले जग हालीसकेको छ। बेथिति र बेरोजगारीले झन् भन्यो झन् धेरै युवालाई दैनिक विदेश धकेलिरहेको छ।
तिम्रो अमूल्य सहयोगको लागि धन्यवाद!
'तिम्रो अमूल्य सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!' रमेशले गत हप्ता प्रसन्न भएर मलाई भन्यो ! उ कोठा सर्दै थियो र सामान सार्न उसले मलाई बोलाएको थियो। म शारीरिक हिसाबले दह्रो वा बलिष्ठ हात पाखुरा भएको मानिस त हैन, तर पनि सहयोग मागेपछि नजानु भनेको दिएपछि नखानु भने जस्तो हेला होला भन्ने ठानेर गइयो। चानचुन २ घण्टा जति पोका पुन्तुरा सार्नमा लगाइयो। मैले गरेको सहयोग यत्ति हो। व्यावसायिक श्रमदारले १ घण्टामा २० डलर जति लिएर सजिलै गरिदिने काम हो त्यो! जाबो २० डलर जतिको कामलाई उसले किन अमूल्य भनेर बढाइ चढाइ गर्यो? घरमा आएर एकछिन चिन्तन गरि टोपलेँ।
बुद्धको जन्मभूमिमा विस्तारवादी आँखा
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एञ्जलिस (यु.सि.एल.ए.) विश्वविद्यालयमा ‘हिस्ट्री अफ इण्डियन सिभिलाइजेसन’ विषय पढाइन्छ। २६ वटा लेक्चरको उक्त विषयमा एउटा लेक्चर बुद्धको जिवनीमा समर्पित गरिएको छ। युट्युबमा समेत राखिएको सो लेक्चर सन् २०१२ मा दिइएको थियो। भारतीय सभ्यताको इतिहास शीर्षक भएकाले भारतसँग मात्र जोडिएको कुराहरू उल्लेख गरिएको होला जस्तो म ठान्छु तर बुद्ध धर्मको उद्गम स्थल नै भारत भएको दावी गरिएपछि इतिहास त केवल शक्तिशालीको हातमा रहन्छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको महसुस गर्दछु।
विष्णु पौडेल -
निर्वाचको वेला उधारो तमसुक होइन, अव कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सोध्नुहोस। हिजो उसले के गरयो भन्ने इतिहास सम्झनुस्। समाजमा उसको योगदान कस्तो छ? त्यो हेर्नुस। पार्टीको आडमा भष्ट्रचार त गरेको छैन? त्यो जिज्ञासा राख्नुस। खाली योजनाका मात्र कुरा भए। कार्यन्वयन भएनन्। आर्थीक विकासको जग बस्नै सकेन। राजनीतिक र आर्थीक पाटो बलियो र स्थिर भएन भने समाजको समुन्नत विकास संभव छैन। तर हामी कहां भयो त केवल योजना मात्र। अनि त्यसमा भागीदार बन्यौ तपाई हामी। जसले जे भन्छ त्यहि कुरा पत्याउने वाबु वाजे त फलानो चिन्हमा भोट हालेका थिए भन्दै हामी पनि त्यहि चिन्ह खोज्दै हिड्याै, तर खोजी भएन विकासको हिमायती को मान्छे हो भनेर।
‘फाँसी देऊ कुलमानलाई!’
राम कुमार सुबेदी -
अँध्यारोमा सलेदो बनाउने, बाल्ने
त्यो निरन्तर उज्यालो
त्यो ननिभ्ने बत्तीले
मेरी आमा बिरोधी हो ,
त्यो लोकमान भएन
अँध्यारो बिरोधी हो
फाँसी देऊ सरकार त्यसलाई
अँध्यारो बिरोधी अँध्यारो कोठरीमा
फ्रान्समा म्याक्रोनको उदयः बैकल्पिक शक्तिहरुको उदय सम्भब छ
यूबराज पाण्डे -
अहिले बिश्व राजनीति फ्रान्सको राष्ट्रपतिय निर्बाचनमा ३९ वर्षका मध्यमार्र्गी नेता इम्यानुएल म्याक्रोन निर्वाचित भएसंगै त्यतै तिर मोडिएको छ। उनको यतिको बढी चर्चा हुनुमा उनको उमेर, व्यक्तित्व, राजनैतिक पृष्टभुमि तथा अत्यन्तै छोटो समयमा राजनीतिमा उदाउनु हो। फ्रान्सको इतिहासमा नै उनि सबभन्दा कम उमेरमा राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाएका छन्। बिसेषत परम्परागत रुपमा पुराना भनिएका ठुला पार्टीहरुको एकाधिकारलाई तोड्दै एकाएक फ्रान्सको राजनीतिमा उदाएका म्याक्रोनको चर्चा झनै चुलिएको छ। १८ औ सताब्दीमा नेपोलियन बोनापार्टदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा परम्परागत मुख्य दुई पार्टी बाहिरबाट राष्ट्रपति बन्ने परम्परालाइ भङ्ग गर्दै म्याक्रोन फ्रान्सको पहिलो रास्ट्रपति त बने। साथ-साथै उनले बिश्व राजनीतिमा एउटा नौलो अध्यायको उदाहरण समेत पेस गरे।
सपना संगको त्यो अन्तिम रात
राजु श्री , दक्षिण कोरिया -
मस्तिष्क खुलिसकेको हुन्छ। आँखा खोल्न र ओछ्यान छोडन प्रत्येक दिन संघर्ष गर्नु पर्छ। अरुलाई शुभदिनको जतिसुकै कामना गरे पनि आफ्नो संघर्ष ओच्छ्यान बाटै शुरु हुने गर्दछ। आँखा मिच्दै सिरानी मुनि बाट मोबाइल झिकेर यसो स्क्रिन अन गर्ने बित्तिकै सपनाको फोटो सहितको स्टाटस देखियो। ‘बाइ बाइ कोरिया, हेल्लो काठमाडौं।’ झल्ल्यास हुँदै निद्राका आँखालाइ अझ चनाखो बनाउदै नियाले। लोकेशन सहित कोरियाको इन्छन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलमा ६ घन्टा अगाडि फोटो सहित स्टेटस पोस्ट गरेको पक्का भयो। म्यासेन्जर हेरें ‘एक्टिभ फोर आवर अगो’ भनेर देखायो। म्यासेन्जर एक्टिभ फोर आवर अगो संगै सपनाले नेपालको यात्रा आधा दुरि पार गरिसकी भन्ने फेरि पक्का भयो।
पेरिस, फ्रान्स, रामचन्द्र भण्डारी -
सुशीलाको यो अग्निपरीक्षा
त्रेतायुगमा जहाँ सत्यको जीत हुन्थर्यो,त्यहाँ पुरुषोत्तम राम अर्थात् पुरुषहरुमा उत्तम राम राजा थियो र उनको राम राज्य थियो। त्यस्तो सत्यको विजयहुने युगको रामराज्यमा पुरुषोत्तम भगवान रामले त एउटा धोबीको कुरा सुनेर पवित्र कहलिएकी पत्नी सीतालाई अग्निपरीक्षा दिन लगाएको थियो भने यो कलियुगमा शेरबहादूर र प्रचण्ड बहादूरभई न्यायको प्रर्तिमूर्तिलाई महाअभियोगको अग्निकुण्डमा बस्न लगाउँदैन भने सोच्नु हाम्रो नै मूर्खता हुन्छ।
यसरी त बाबुपछि छोरा विदेशिनु पर्छ!
खेमराज रानाभाट -
बहुदल आएपछि जब नेपाल सरकारले राहदानी सबैका लागि सहज बनायो तब परिवारको मुख्य व्यक्ति बाबु कामका लागि विदेशिने र छोराछोरी, श्रीमती शहर झर्ने क्रम तीव्र भएको हो। बुढाबुढी भएका आमाबुबा मात्र आजभोलि आफूले कमाई खाएको जग्गा जमिन, घर र ठाउँको मायाले हिमाल-पहाडका गाउँ-ठाउँमा भेटिन्छन्। यी बुढेसकाल लागेका बाबुआमाहरू पनि हिड्डुल गर्न सक्ने र आफ्नो लागि खाना आफैं बनाउन सक्ने अवस्थासम्म मात्र गाउँमा रहने छन्।
सन्तोष न्यौपाने -
- प्रकाश सापकोटा -
मिठाइ ख्वाए ख्वाउनुस् नख्वाए नख्वाउनुस्,
उपहार ल्याए ल्याउनुस् नल्याए नल्याउनुस्,
वृद्धाश्रममा भेट्न गए जानुस् नगए नजानुस्,
हँसाए हँसाउनुस् नहँसाए नहँसाउनुस्,
गुन लाए लाउनुस् नलाए नलाउनुस्,
पिडामा मल्हम लगाउनुस् या नलगाउनुस्,
तर फेसबुक देखाउनुस्